नेपालमा ५० दिन बढीको क्वारेनटाइन बास | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
नेपालमा ५० दिन बढीको क्वारेनटाइन बास
मेरो घर दाङ हो । म भारतको दिल्लीमा एउटा होटेलमा काम गर्थेँ । त्यहाँ पहिलो पटक गरिएको लकडाउन १४ अप्रिलमा खुल्ने भनिएको थियो । १४ अप्रिलमा लकडाउन खुल्छ भनेर हामी भारतमै बसेका थियौँ । तर लकडाउन लम्बिँदै गयो, सङ्क्रमणको डर पनि बढ्दै गएपछि घर परिवारसँग अब भेट नै हुँदैन कि जस्तो लाग्न थाल्यो ।
भारतमा रहेका नेपालीहरू हिँड्दै सीमासम्म पुगिसकेका थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहेका नेपालीलाई ल्याएपछि सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेपछि त हामी नेपाल छिर्नै पाउँदैनौँ कि जस्तो लागिसकेको थियो ।
लामो समयको हार गुहारपछि बल्ल सरकारले भारतमा रहेका नेपालीलाई नेपाल भित्र्याउने भन्यो । त्यसपछि मैले मेरा घर रहेको बंगलाचुली गाउँपालिकामा सम्पर्क गरेँ । गाउँपालिकाकाले आउनुहोस् नाकामा बस पठाउँछौ भन्यो ।
त्यसपछि ८ जेठमा म लगायत धेरै मान्छेहरू दिल्लीबाट बस चढ्यौँ । ९ जेठको दिउँसो हामी कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा आईपुग्यौं । मुख्य नाकाबाट छिर्न नपाइने भएपछि हामी जङ्गे पिलरको किनारै किनार ५ किलोमिटर हिँडेर चोर बाटोबाट नेपाल छिर्‍यौँ । यसरी चोर बाटोबाट नेपाल छिर्ने हामीहरू १५ सय जना जति थियौँ होला ।
हामीहरूले मास्क, पन्जा लगाएका थियौँ । स्यानिटाइजर पनि प्रयोग गरिरहेका थियौँ । तर यो भिडमा सामाजिक दुरी कायम गर्न सकिने अवस्था पटक्कै थिएन । यसरी हिँड्दा जेठको गर्मीमा थाकेर धेरै मान्छेहरू रुखको छहारीमा बसेका देखिन्थे । कतिपय साथीहरू त भोकै थिए, उनीहरू सगोलमा बसेर चिउरा, चाउचाउ खाँदै थिए ।
हामीसँगै सगोलमा हिडेकाहरु चोर बाटोबाट नेपाल निस्केर बसिरहेका थियौँ । साँझ ७ बजे हामीलाई लिन भनेर गाउँपालिकाले पठाएको बस आयो । अनि हामीमा चढ्यौँ । हामीलाई लिन भनेर गाउँपालिकाले ३ वटा बस पठाएको थियो । ३ वटा बस पठाउँदा पनि मान्छे नअटेपछि कोही साथीहरू छतमा समेत चढ्नुभयो । कोही भने गाडी भित्रै उभिनुभयो ।
यसरी १० गते बिहान हामी हाम्रो गाउँपालिकाको वडा नं २ मा रहेको कालिका प्राविमा बनाएको क्वारेन्टाईनमा पुग्यौँ । यो क्वारेन्टाईनमा हामी ३५ जना बस्यौँ । हामी ३५ जनाले प्रयोग गर्ने शौचालय, धारा एउटै थियो ।
स्कुलको क्वारेन्टाईनमा हामी बसिसकेपछि गाउँलेहरूले स्कुलको बाटो हिँड्न समेत छाडे । भारतबाट फर्केको भनेपछि गाउँलेहरू डराए । परिवारका सदस्यले पनि ल्याएको खाना टाढै राखेर फर्किन्थे ।
क्वारेन्टाईनमा १४ दिन बसिसक्दा पनि हाम्रो पिसिआर जाँच भएन । त्यसपछि हामीले पीसीआर जाँच गराउनुहोस् भनेपछि १५ औँ दिन (२५ जेठ)मा पीसीआर जाँचका लागि स्वाब सङ्कलन गरियो ।
तर हामीसँगै भारतबाट आएर अर्को क्वारेन्टाईनमा बसेका ३ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि हामी बसेको क्वारेन्टाईनमा पनि माहौल त्रसित बन्यो । तर कसैलाई पनि ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षण भने देखिएको थिएन । एकातिर लक्षण नदेखिएको अर्कोतिर पीसीआरको नतिजा पनि समयमा नआएपछि दुई जना साथीहरू त क्वारेन्टाईनबाट भाग्नुभयो ।
पीसीआरको नतिजा आउन ढिला भएपछि त गाउँपालिकाले नै केही मानिसहरूलाई क्वारेन्टाईनबाट घर पनि पठायो । १८ औँ दिन (२८ जेठ)मा हामीसँगै एकै क्वारेनटाइन बसेको एक जना साथीलाई ज्वरो आयो । त्यसपछि उहाँलाई तुरुन्तै सदरमुकाम घोराही पठाइयो। अनि उहाँमा कोरोना सङ्क्रमण रहेको पुष्टि भयो ।
एकैसाथ क्वारेन्टाईनमा बसेको मान्छेलाई कोरोना पुष्टि भइसक्यो । हाम्रो स्वाब पनि सङ्कलन भइसक्यो तर नतिजा भने स्वाब सङ्कलन भएको १६ दिनपछि (१० असार)मा मात्र आयो । नतिजा अनुसार क्वारेन्टाईनमा बसेका हामी ३५ जना मध्ये ३३ जनामा नै कोरोना सङ्क्रमण रहेको पुष्टि भयो ।
३३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि क्वारेन्टाईनबाट घर पठाइएका र भागेर गएका साथीहरूलाई पनि फेरि क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो । सङ्क्रमण पुष्टि भएकै दिन हामीलाई हामी बसिरहेको क्वारेन्टाईनबाट गाडीमा राखेर सदरमुकाममा रहेको पद्मोदय क्याम्पसमा बनाइएको आइसोलेसनमा राखियो ।
सङ्क्रमण देखिएपछि हामी क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरू निराश भएका थियौँ । अब के कसो हुने हो ? मरिने हो कि बाँचिने हो भन्दै कति साथीहरू त रुनु पनि भएको थियो । अर्कोतिर घर परिवार पनि रुँदै फोन गर्थे ।
यता सदरमुकामको आइसोलेसनमा हामी ७५ जना सङ्क्रमित बसेका थियौँ । ७५ जनामा ५५ वर्षका वृद्ध देखि ३ वर्षका बालकसम्म थिए । त्यहाँ पनि शौचालय, पानी धारा भने हामी सबैको एउटै थियो । एउटा कोठामा हामी ३ जनासम्म सङ्क्रमित बसेका थियौँ ।
त्यहाँ बसेका हामी कसैलाई पनि ज्वरो आउने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता केही लक्षण देखिएन । तैपनि हामी डराएका ठुयों । एउटै क्वारेन्टाईनमा ३३ जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँका मान्छेहरू पनि त्रसित भएका थिए ।
हाम्रै कारणले गाउँमा सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ कि भनेर हामी पनि डराएका थियौँ । एकातिर गाउँमा सङ्क्रमण फैलिन्छ कि भन्ने डर थियो अर्कोतिर आफूलाई के हुने हो भन्ने डर थियो ।
त्यसमाथि डाक्टरहरूले हामीलाई एक दिन पनि हेरेनन् । हामी सबैलाई एउटा थर्मोमिटर दिइएको थियो । हरेक दिन बिहान र बेलुका आफ्नो तापक्रम नापेर डाक्टरलाई सुनाउनुपर्थ्यो । आइसोलेसनमा बस्दा हामीलाई कुनै प्रकारको औषधी पनि दिइएन । डाक्टर त हाम्रो नजिक कहिल्यै पर्नु भएन । अन्य रोग लागेका साथीहरूले खाने औषधी मगाउँदा पनि समयमा ल्याइदिँदैन थिए ।
सङ्क्रमण पुष्टि भएको १४ दिन आइसोलेसनमा बसिसकेपछि हामीलाई कुनै लक्षण नदेखिएको हुँदा पीसीआर नगरीकनै घर पठाउने भनियो । हामीले हुँदैन पीसीआर गरेर मात्र हामी घर जान्छौँ भन्यौँ तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन् । एक पटक सङ्क्रमण देखिसकेको छ, सङ्क्रमण ठिक भए नभएको निधो नगरी हामी कसरी घर जाने ? के भनेर घर जाने भन्दै हामीले विरोध गर्‍यौँ ।
तर त्यहाँ रहेको डाक्टर, नर्सले पीसीआर गर्न सकिँदैन लक्षण देखिएको छैन घर जानुहोस् भने । त्यसपछि हामीले हामी बसेको क्याम्पसको छतमा गएर सोसियल मिडियामा लाइभ गर्दै पीसीआर जाँच गर्न माग गरेर विरोध प्रदर्शन नै गर्‍यौँ ।
त्यसपछि प्रहरी, डाक्टर र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा पीसीआर जाँच गर्ने भनियो । तर पीसीआर जाँचका लागि हामी थप १४ दिन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भनियो ।
अगाडि नै हामी क्वारेनटाइन र आइसोलेसन गरेर करिब ५० दिन बसिसकेका थियौँ । फेरि १४ दिन बस्न कोही मानेनन् । बल्लतल्ल विदेशबाट देश आइपुगेको छ । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि घर जान नपाएका हामी कसैले पनि १४ दिन फेरि आइसोलेसनमा बस्न मानेनौँ । त्यसपछि हामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर घर पठाइयो । घर पठाउँदा हामीलाई अझै केही दिन एकान्त बासमा बस्नु भनिएको थियो ।
आईशोलेसनबाट कोरोना ठिक भए नभएको निश्चिन्त नै नगरी म पनि घर फर्केँ । मेरो घरमा श्रीमती र दुई छोरीहरू छन् । आईशोलेसनबाट फर्केको ७ दिनसम्म म घरमै एकान्त बासमा बसेँ । परिवारकै सदस्यहरूको सम्पर्कमा पनि आइन । त्यसपछि १४ दिनपछि भने म घरबाहिर निस्केँ ।
तर म सङ्क्रमित भएको थाहा पाएपछि समाजमा मेरो परिवारका मान्छेसँग अलिक दुरी बनाउने, मेरो परिवारका सदस्य बाहिर ननिस्के हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार भयो । करिब ५० दिन बढिको क्वारेनटाइन र आइसोलेसन बसाइँमा मलाई कुनै लक्षण देखिएन । तर आइसोलेसन र क्वारेनटाइन बसाई भने कत्ति पनि सहज थिएन । त्यसमाथि आईशोलेसनबाट बाहिर निस्कँदा पीसीआर नगरेकाले म र मसँगै बसेका साथीहरूलाई गाउँमा घुलमिल हुन भने अप्ठेरो भयो ।
तर अहिले पनि मलाई डर भने लाग्छ । मान्छेहरूले सङ्क्रमितलाई विभेद गर्छन् । हेप्छन् भन्ने थाहा पाएर म आफू पनि कोरोना सङ्क्रमित थिए भनेर परिचय खुलाउँदिन । कतिपय मान्छेहरू म पनि सङ्क्रमित थिएँ भन्ने थाहा पाएपछि नराम्रो व्यवहार पनि गर्छन् । अहिले पनि म गाउँलेहरूले हेप्लान्, अपमान गर्लान्, नराम्रो व्यवहार गर्छन् कि भन्ने डरले घरबाट बाहिर निस्कन्न ।
यो कथा नुमेष घर्तिमगरसंग २३ साउनमा गरिएको कुराकानीमा आधारित भएर लेखिएको हो ।
अन्तत: एक महिनामा एम्बुलेन्सनै चढेर भए पनि घर पुगियो
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार ०७:४३